Su'aalahaaga Ka Jawaabo Qareenka Maanta, Hurdo Si Wanaagsan Caawa. Waan kaa caawin doonaa hada. - NJ & NY Real Estate, Probate, Difaaca Saadaalinta iyo Qareenada Musalafnimada
Qoraalka: (917) 687-4219
Subscribe iyo La Soco
Hada U Wac Kulan Kulan Istaraatiijiyadeed oo Bilaash ah(844) 533-3367
NJ & NY Real Estate, Probate, Difaaca Saadaalinta iyo Qareenada Musalafnimada
Qareenka guryaha ee Magaalada Jersey
Dulmar guud oo ah Hanti Maaliyadeed
Wax ka badalida amaahda
Probate, Wilayada, Aaminta iyo Dacwada guryaha
Dacwada & Xalinta Khilaafaadka
KHUDBADAHA KHATARTA DUKAANKA
Su'aalahaaga Ka Jawaabo Qareenka Maanta, Hurdo Si Wanaagsan Caawa. Waan kaa caawin doonaa hada.
Jooji iibka Sheriff
Iibka iyo Falanqaynta Iibka Gaaban
Xawaaladda Iibsiga ee Degan iyo Ganacsi
Tijaabadada, Kaniiniyada, Ammaanada, iyo Dacwada
Canshuur Bixinta cashuurta
Cutubka 13 Musalafnimada
Cutubka 7 Musalafnimada
Cutubka 11 Musalafnimada
Waxaan ka soo gudbineynaa dhammaan xulashooyinkaaga si aan kaaga caawino qorsheynta iyo go'aaminta habka ugu wanaagsan ee aad u dhaqan gasho. Waxaan nahay shirkad sharci oo adeeg-buuxa oo leh qareenno ku saleysan Jersey City, NJ; Hackensack, NJ; Freehold, NJ; iyo Brooklyn, NY. in uu leeyahay qareeno badan oo dhammaantood u heellan sidii ay kuu caawin lahaayeen.
GIMME MY IN-DEPTH STRVEGY SESSION OO KU SAABSAN XAALADDA Maanta!
Waxaan ku qaban doonnaa waxyaabo ku saabsan 3 kulankan:
Waan ku dhageysan doonnaa.
Waan ka wada gudbi doonnaa ikhtiyaaraadkaaga oo dhan.
Waxaan diyaarin doonnaa qoraal qoraal ah oo ku saabsan kiiskaaga oo aad u geysan karto qareen kale haddii aad dooratay inaadan nala shaqeynin.
100% Xaqiijinta Gaarka ah
La Xiriir Garyaqaannada Difaaca Qulqulka New York New York ama New Jersey Maanta.
Xafiisyada Sharciga ee Patel, Soltis & Cardenas waxay soo bandhigaan karti qareen oo aad u wanaagsan New York iyo New Jersey, iyagoo diiradda saaraya dacwadda la-wareegidda guryaha, dib-u-habeyn deyn ah, kacaan, probate, iyo macaamil-wareejinta guryaha ee New Jersey. Hadaad u maleynaysid inaad ubaahan karto Xeer Ilaaliyaha Guud ee NJ or Xeer Ilaaliyaha Qaranka NY ku bilow inaad lahadashid mid BILAASH maanta. Waxaan nahay shirkad ku saleysan qoys oo diiradda saareysa u adeegidda shakhsiyaadka iyo ganacsigooda. Haddii aad ubaahantahay difaac qaawan New York ama New Jersey ama reerkaaga Will. Waxaan leennahay aqoonsi sharci iyo xirfad-yaqaanimo adiga. Tallaabada ugu horreysa ee lagu xallinayo dhibaato kasta waa in la fahmo inaad haysatid ikhtiyaarro. Kala hadal qareenka maanta wixii ku saabsan xulashooyinkaaga oo dhan.
HADAAD FURSATAY - TALADA U SAMEEYSAA Maanta!
Adeegso Qareenka Difaaca La-wareegida si aad u dhowrto xuquuqdaada.
Haddaad rabto inaad ka fogaato la-wareegis ama aad hesho deyn wax ku beddesho, waa inaad kala tashataa Qareenka Difaaca La-sii-wareejinta hadda si aad uga gudubto dhammaan xulashooyinka lagu badbaadinayo gurigaaga. Tallaabo kasta oo aad qaadatid maanta waxay kuu heli kartaa waqti dheeraad ah mustaqbalka. Shaqaaleysiinta Garyaqaan u yaqaan sharciga bini-aadamka ayaa ah tillaabada ugu horreysa ee gurigaaga lagu hayo.
Cutubka 7 Musalafnimada: Ka soo noqoshada xareynta fekerka iyo deynta deynta ah waa mid ku dhow isla markiiba.
Talada sharciga waxaa caadiyan la bixiyaa iyada oo lagu beddelayo magdhaw lacageed ama magdhow la taaban karo
Maadaama aad tahay Qareenka New Jersey Estate, waxaan kaa caawin doonaa inaad ubaahantahay inaad ku guuleysato dacwada Probate ama aad u diyaarsatid dardaarankaaga si reerkaaga mustaqbalka uga fogaado dacwo.
Dib-u-habeyn amaahdu waxay wax ka beddeleysaa shuruudaha amaahda jirta. Tani dib uma noqonayso….
Gorgortanka Gaaban ee iibka ah waa wadahadal u dhexeeya laba qof ama in ka badan ama dhinacyo loogu tala galay in lagu gaaro…
Kicitaanka cutubka 13 ayaa joojinaya la-wareegidda…
Dhex-dhexaadintu waxay noqon kartaa mid tabaruc ah ama khasab ah inkasta oo gar-qaadidda khasabka ahi uu iman karo oo keliya
HALKII FADLAN SI AY U FURATO FURSADAHAAGA XULASHADAADA BILAASH
Nala soo xiriir annagana waxaan kuu sameyn doonnaa waxyaabo 3 ah:
1. Waan ka wada hadli doonnaa dhammaan arrimaha sharciga ee aad wajahayso.
Tallaabada ugu horreysa ee aan qaadno waa in aan dhageysanno waxa dhabta ah ee xaaladda ku xeeran. Waxaan rabnaa inaan ogaano wax walba oo dhacay, iyo waxaad rabto inaad dhacdo marka xigta. Waxaan dooneynaa inaad ereyadaada noogu sheegto waxa dhacay, iyo waxa yoolkaaga ugu dambeeya yahay xaaladdaada. Marar badan waxaan haysannaa macaamiil deyn ku jira, oo wajahaya arrimo ay jeclaan lahaayeen inay ka fogaadaan laakiin u baahan inay xalliyaan. Waxaan kugula talineynaa waxay kuxirantahay waxay isku dayeen waagii hore iyo waxay rabaan inay sameeyaan mustaqbalka. Xaaladda guri ka-wareejinta, waxaa jira xalal badan oo ay ka mid yihiin dacwadda la-wareegis guri ku yaal gobolka ama maxkamadda federaalka, kireynta guriga, ku-iibinta guriga iib-gaaga gaaban ama iib joogto ah, kacaan (Ama cutubka 7, cutubka 13 ama xitaa labadaba haddii xaaladda Annaga oo aan fahamsanayn sheekadaada buuxa, uma tagi karno qaybta aan uga wada hadalno ikhtiyaarada.
2. Waan ka soo gudbi doonnaa difaacyada iyo xulashooyinka aad haysatid.
Xaaladda qof walba waa mid gaar ah, dhammaan xalalka dhammaantiisna uma wada shaqeeyaan qof walba. Khasaaraha cutubka 7 wuxuu noqon karaa mid ku habboon hal qoys, laakiin adiga, waxay kicin kartaa Cutubka 7 Wakiilka doonaya inuu iibiyo gurigaaga. Annaga oo ka bixin faahfaahinta ku saabsan xaaladdaada kuuma suuragelin karno kala-doorashooyinka kugu habboon adiga. Haddii aad horay u sameysay wax ka beddelid deyn ah, dib ayaan u eegi doonnaa dib-u-habeyn amaahdaadii hore waxaanan arki doonaa sababta loo diidey, ka dib waxaan ka dhigi karnaa talo soo jeedin ku saabsan sida loo ansixiyo. Waxaan sidoo kale kuu sheegi doonnaa haddii daqligaaga uusan u badneyn inuu ku oggolaado ama kuu dejiyo qorshe kor loogu qaadayo dakhligaaga. Haddii aad fiirineyso difaacida gurigaaga ee maxkamada dhexdeeda, waxaan dhex mari doonnaa dhammaan diiwaanada maxkamadda si aan u aragno haddii aad heysato wax difaac ah oo aad geftay. Waxaan leenahay kiisas la xiriira adeeg aan habooneyn, waxaan ka baaraandegnaa arrimaha gacanta looga dhigay
3. Waxaan diyaarin doonnaa liis gaaban oo ku saabsan xaqiiqada xaaladaada oo aad u geyneyso qareeno kale haddii aanaan ku fiicneyn qareenadaada.
Haddii aanaan u dhigmin adiga qareen ahaan, waxaan kuu soo diri doonaa nuqul ka mid ah qoraalada aan diyaarinay intii lagu guda jiray wareysiga. Waxay taxaysa xaqiiqada xaaladaada. Ka dib waad isticmaali kartaa kuwan haddii aad jeceshahay inaad wareysato qareenno kale marka aannaan ku habboonayn qareenkaaga.
Ma qaadno kiis kasta oo nala soo bandhigo. Haddii aanaan kugu guuleysan karin, waan kuu sheegi doonnaa. Waan sahmi doonnaa dhammaan xulashooyinkaaga, laakiin dhamaadka maalinta, haddii aanan ku caawin karin, waan kuu sheegi doonnaa.
Waxaan leennahay qareeno diirada saara qeybaha kala duwan ee sharciga. Waxaan leenahay qareenno shati haysta oo New Jersey ah kuwaas oo diiradda saaraya Difaaca Soo-Saarista, Xawaaladaha Guurinta Iibsiga, Musalafnimada, Mushaharka, iyo Aruurinta Daynta / Isku-Darka. Waxaan leenahay qareenno shati haysta oo ku sugan New York kuwaas oo diiradda saaraya Difaaca Soo-Saarista, Xawaaladaha Guurista, Musalafnimada, Musaafuriinta, Sharciga Qoyska iyo aruurinta Daynta / Aruurinta. Markii aad nala soo xiriirto waxaan u baahan nahay inaan si wareysi gaaban ah kula yeelano si aan u hubinno inaad ku xiran tahay qareenka kaasoo sida ugu fiican kaa caawin kara arrintaada.
WAXAAD HESHIIYAAN FURSADAHA - INAAD KU SAMEEYSAA MAANTA maanta
Waxaan haynaa hannaan talaabo ah oo ah 3 si aan u hubino inaan adiga ku caawin karno, ama aan kuu dejinno inaad la hadasho qareen kale oo leh liis gunaanad ah xaqiiqooyinka ku xeeran xaaladdaada. Waan fahamsanahay inaan ku habboon nahay qof walba, laakiin waan kaa caawin doonnaa si qareenka ku xiga ee aad ula xiriirto, aad ugu saxdo jawaabaha aad u baahan tahay.
100% Diirada Saaray Kiiskaaga
Waxaan kaa caawin karnaa diyaarinta dardaaranka, oo ay weheliso dardaaranka caafimaad / dardaaranka caafimaad, ama abuuri kara kalsooni lagu ilaaliyo hantidaada. Qareenadeena Probate-ka ee New Jersey ayaa kaa caawin doona sida fulinta ah
Shirkaddan ayaa loo aasaasay inay ka caawiso badbaadinta gurisiinta dadka marka laga hadlayo la-wareegidda guryaha. Wada-hawlgalayaashayadu dhammaantood waxay diiradda saarayaan difaaca sii-deynta midkoodna New Jersey ama New York. Waxaan fahamsanahay suurtagalnimada ugu weyn ee lagu xallin karo la-wareegis guri iyadoo la adeegsanayo dacwadda, dib-u-habeyn lagu sameeyo,
Musalafnimada, oo ay ku jiraan kicinta New Jersey iyo Musalafnimada New York, ayaa ah qaabsocodyo maxkamadeed oo federaal ah oo loogu talagalay inay ka caawiso macaamiisha iyo ganacsatada labadaba inay baabi'iyaan ama ay bixiyaan dib u bixinta deynta iyagoo ilaalinaya maxkamadda kacaanka. Sharciga federaalka ee
Eeg Dhammaan Adeegyada
Amaahda Waxbaa laga Beddelay
Daynta Musalafnimadii Damaacday
Saacadaha Pro Bono Shaqeynayay
Peter iyo Veer labaduba waxay ahaayeen xirfadlayaal si dhakhso leh jawaabihiina su'aalaheena. Iyagu kaliya ma aysan hubin inaan helno jawaabta su'aalaheenna laakiin aqoonta saxda ah ayaa la siiyay si ay u gaaraan go'aan wanaagsan. Heer sare ah.
MUXUU YAHAY BILAAHAN?
Haddii aad raadineyso inaad hesho kooxda qareenada ugufiican ee fahmaya dhinacyo badan oo sharciga New Jersey ah, waxaan nahay koox qareeno khibrad leh oo kugula dhaqmi doona sidii qof macaamil ah. Waxaan leennahay qareeno fara badan oo ku dhaqma sharciga la xiriira arrimaha maguurtada, amaahda, sharciga difaacida guryaha, dib u habeynta amaahda, Siyaabaha ugu wanaagsan ee loo Iibsado ama loo Iibiyo Hantida, Dardaaranka & Awoodaha Qareenka, Probate & Estates, Relief Relief, Musalafnimada Shaqsiyeed, iyo Ganacsiga Khasaare. Waxaan ilaalin doonaa xuquuqahaaga maadaama aan u wada shaqeyno koox ahaan si aan kuu siino caawimaad dhab ah. Qareenadayada ayaa fahansan qaababka dhammaan noocyada arrimahan ay u wada shaqeeyaan. Waxaan ilaalinaynaa asturnaantaada haddii aad taleefoonka noogu soo wacdid ama aad nagu soo booqatid mid ka mid ah Xafiisyadayada si loogala taliyo. Si kasta oo aad doorato inaad ula xiriirto shirkaddeenna waan ka gudbi doonnaa ikhtiyaaraadkaaga.
Waxaan xafiisyo ku leenahay Magaalada Jersey City, NJ oo laga soo qaaday Hudson County Courthouse; Hackensack, NJ agagaarka geeska laga bilaabo Bergen County Courthouse; Freehold, NJ dariiqa laga soo galo ee Maxakada Degmadda Monmouth, Manhattan, NY oo leh xarun ku taal Midtown New York City; iyo Brooklyn, NY oo ka sii horreysa King County Courthouse oo ka socota wadada ka soo baxda maxkamadda Burburka ee Brooklyn si ay ula kulmaan macaamiisheenna. Waxaan ku bixinaa la-talin bilaash ah kiisaska badankood dhammaan arrimaha maxkamadda ee New Jersey iyo New York.
Fadlan nagala soo xiriir (844) 533-3367 ama emayl noogu soo dir at [Email ilaaliyo]
Aamin aaminnimadayada si aan ugu adeegno dhammaan baahiyahaaga sharci iyo dhaqaale ee 2018 iyo wixii ka dambeeya. Shirkaddayada waxaa ka go'an inay ku caawiso.
Veer P. Patel, Esq.New Jersey - Wada-hawlgalayaasha Maamulka
Derek (DJ) Soltis, Esq., MBA / MSMaareeyaha Nidaamka Musalafnimada - Iskaashi
Lazaro Cardenas, Esq.Maareeyaha Habdhaqanka Iibsiga
Jason C. Bost, Esq. , MBANew York - Wada Shaqeynta
Ugu Dambeeyay Shabakadda
Xuquuqda kiraystayaasha ee Kordhinta NJ kahor iyo kadib NJ Sheriff Sale
Eeg Dhammaan Baloogyada
Maxaa dhacaya haddii aan deyn bixi uga baxo Musalafnimadayda?
Amaah Maalmeedku miyaa daboolay kicitaan?
Lambarka Bulshada ma loo tixgeliyaa inuu yahay kicitaan kicitaan?
Eeg Dhammaan Waxyaabaha La Isweydiiyo
1. Waan ka wada hadli doonnaa dhammaan arrimaha sharciga ee aad wajahayso. 2. Waan ka soo gudbi doonnaa difaacyada iyo xulashooyinka aad haysatid. 3. Waxaan diyaarin doonnaa liis gaaban oo ku saabsan xaqiiqada xaaladaada oo aad u geyneyso qareeno kale haddii aanaan ku fiicneyn qareenadaada.
Kala Xiriir Hada Si Loogu Tala Galay Istiraatiijiyad Istaraatiijiyadeed oo Bilaash ah
Kusoo Dhawow Wargeyskeena Bisha
Fadlan bixi magacaaga iyo cinwaanka e-maylka si aad ugu qorto wargeyskeena billaha ah.
Xafiiska Magaalada Jersey:
Suite 307, Magaalada Magaalada Jersey, NJ 07306
Dusha sare, Hackensack, NJ 07601
Xafiiska Lacag La'aanta:
Xafiiska Magaalada New York:
89 Market St., dabaqa 4,
Xafiisyada Sharciga ee Patel, Soltis & Cardenas waxay siiyaan macangagnimo, daah-ka-qaadis iyo wakiilnimo dib-u-habeyn deyn ah oo loogu tala galay macaamiisha dhamaan Gobolka New Jersey iyo aagga New York oo leh xafiisyo ku yaal Jersey City, Freehold, Hackensack, Manhattan, iyo Brooklyn. Websaydhkan waa Xayeysiin Sharciyeed. Macluumaadka websaydhkan waxaa loogu talagalay ujeedooyinka guud ee macluumaadka oo keliya. Ma jiraan wax boggan ku jira oo loo qaadan karo talo sharciyeed kiis kasta ama xaalad kasta oo jirta. Macluumaadkaan looguma talagalin in la abuuro, iyo helitaanka ama daawashada kuma eka xiriirka macmiilka ee qareenka. Annagu qareenno ayaan nahay, laakiin annagu garyaqaanno ma nihin ilaa la soo saxeexo wakiil hayaha.
TALOOYINKA TILMAAMAHA Natiijooyinka hore ma dammaanad qaadaan natiijada mustaqbalka. Waxaan nahay hay'ad deyn deyn bixisa. Waxaan dadka ka caawinnaa inay xareystaan ​​xaraashka sida ku xusan Xeerka Musalafnimada.
Xuquuqda daabacaadda © 2020 ee Patel & Soltis, LLC. Dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya
Wac Qareenka Hada